China High Speed ​​Gantry Milling Machine mveliso kunye nabenzi | UOturn
Imanyuwali yemveliso i-SG1614 iyile kwinkqubo yokuhlangana ekhethekileyo yenkampani kwaye ibonakalise ukuchaneka okuphezulu, ukusebenza ngokukuko kunye nozinzo oluphezulu kwimarike.
I-SG1614 iye yafumana inkqubo ekhethekileyo yenkampani kwaye ibonakalise ukuchaneka okuphezulu, ukusebenza kakuhle kunye nokuzinza okuphezulu kwimarike.
Izixhobo zomatshini ezibalaseleyo ziboniswa kwimveliso yokuvelisa ukungunda, imveliso yokuvelisa imoto, izixhobo zonyango ezichanekileyo, ishishini le-aerospace kunye nezinye iinkalo. Ngobuchwephesha obugqwesileyo kunye nokusebenza ngokugqwesileyo komatshini, baphumelele indumiso elungileyo kwaye baxhaswe ngokubanzi kwaye baqinisekiswa ngabathengi abatsha nabadala. Kwaye uthembele.
2. Intsebenzo yeNtshayelelo
Isakhiwo se-fuselage samkela uyilo oluxhaswe ngokupheleleyo, kunye nokulinganisa kweekhompyuter
Uhlalutyo lobume bomzimba lwenzelwa iindawo eziphambili zoxinzelelo. Isiseko somatshini
Uthwala amandla angama-4000kgf kwaye ukuguqulwa kwayo kungaphakathi kwe-0.01mm. Inokumelana ngokupheleleyo ne
ukuqina kweemfuno zokusika.
Ikholam yamkela ubume be-gantry ehlanganisiweyo kwaye yandisa indawo yokuxhasa ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwe-spindle kunye nokusebenza ngesantya esiphezulu, okunokunyusa
ukuqina kwemishini kunye nokuzinza kobomi benkonzo. Ifakwe ngesantya esiphezulu othini, oko kuya kuba lula ukuhlangabezana neemfuno ngqongqo ukusika intsimbi lukhuni ingxubevange.
Isikhokelo sohlobo oluphezulu sokuchaneka kwinqanaba eliphezulu esisuka eJamani naseTaiwan
Screw ibhola zisetyenziselwa ukuqinisekisa ukuchaneka kwejiyometri kunye nokuchaneka kokuma kobume ngokubanzi, uzinzo kunye nobomi benkonzo.
Idrive drive isebenzisa uphawu lwaseJamani lodidi lokuqala, oluphezulu kunokhuphiswano
inqanaba elifanayo ngokwemveliso yokukhutshwa kunye nokuchaneka kokuma ngokuchanekileyo.
Isantya esiphakamileyo esakhelwe ngaphakathi kokuluka kunye noyilo lwesakhiwo esifanelekileyo siqinisekisa ngokupheleleyo ukuba
yokuluka unako ukugcina ukusebenza ezinzileyo nangokuchanekileyo ngexesha-high speed okuqhubekayo
Ukusebenza, kwaye unokufezekisa ukuchaneka okuphezulu kunye nokusebenza okuphezulu kwe-gloss ngexesha lokusika.
Isantya esiphezulu sokusebenza kwee-axis ezintathu zesixhobo somatshini sinokufikelela kwi-24m / min, kwaye isantya sokusika sinokufikelela kuluhlu lwe-0-10M / min, olufinyeza ixesha lokulungisa kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle. Isixhobo sokuluka siqinisekisa ukukhutshwa okuphezulu kwetorque
kunye nokuchaneka okuhle kunye nokuthembeka ngexesha lomsebenzi wokusika. Phantsi kweemeko zokusika ngesantya esiphezulu, imisebenzi yokuchwetheza inokugqitywa ngokusebenza ngcono.
Inkqubo yesantya esiphezulu sekhompyuter ixhasa umsebenzi wokuxelwa kweenkqubo ezinkulu, kwaye inokuqikelela imiyalelo yokusebenza kwezahlulo ezingama-250 ukuqinisekisa ukuba akusayi kubakho kulibaziseka ekusikeni okukhawulezayo, okunokonga ixesha lokuhambisa kunye nokwandisa ukusebenza ngokukuko nge-20 %.
Uhambo lwe-X axis (mm)
Uhambo lwe-axis (mm)
Z axis zokuhamba (mm)
Indawo enokusetyenzwa (ubude x ububanzi) (mm)
Umgama ukusuka kumphezulu wetafile ukuya kumphezulu wokuphela (mm)
Amandla othini (KW)
Ubungakanani boomatshini (mm)
Inkqubo yolawulo: Siemens 828D
Inkqubo yolawulo: Mitsubishi M80A. FANUC 0i M
Inkqubo yokupholisa yokuluka
Yakhelwe kwisixhobo 20000rpm (HSK-A63)
Inkqubo yomoya yokuthambisa
Ring yokuluka zokupholisa zokupholisa
Ukuvalelwa okupheleleyo kunye nekhava ephezulu
I-CNC itafile ejikelezayo (i-axis yesi-4)
Isibane somqondiso we-3-umbala, ukukhanya kokusebenza
Isixhobo sokusetha izixhobo
Izixhobo eziqhelekileyo zenkonzo
Helix chip yokuhambisa
Umatshini wokufaka umoya kwikhabhathi yombane
Egqithileyo Heavy Duty Gantry Milling Machine
Okulandelayo: Ukugrumba Kwaye ngokucinezela Machine edityanisiweyo